မြောင်းမြအကျဉ်း​ထောင်မှာ ဥာဏ်ကောင်းလွန်းတဲ့ ထောင်ဝင်စာ အခုတော့ ခံလိုက်ရပြီ – ရှအေလငျး
​မြောင်းမြ ဇန်​နဝါရီ ၂၉
၂၉.၁.၂၀၁၉ နံနက်​.၁၁နာရီ၄၅မီးနစ်​ခန့်​အချိန်​ ဧရာဝတီတိုင်း​ဒေသကြီး​မြောင်းမြမြို့ အကျဉ်း​ထောင်​တွင်​ထောင်ဒဏ်​(၂​၉)နှစ်​ကျ​နေ​သော အကျဉ်းသား
နိုင်​လင်းထွန်း(ခ)ဖိုး​ခွေး(ခ)တင်​ကိုဦး(၂၈)နှစ်​(ဘ)ဦးခင်​​မောင်​​ထွေး အမှတ်​.၆၂.​အောင်​မင်္ဂလာလမ်း.ကြူစမ်း​ကျေးရွာ.မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်​ အားရန်​ကုန်​မြို့ပန်းပဲတန်း အမှတ်​၁၈.ရပ်​ကွက်​ ဗိုလ်​စွန်​ပက်​လမ်းထိပ်​​နေသူ
ဇော်​မင်းကိုကို.(ခ)ရာမန်​(၂၁)နှစ်​(ဘ)ဦး​ဇော်​ဝင်းနှင့်​မြဝတီမြို့အမှတ်​(၂)ရပ်​ကွက်​ပတ္တမြားလမ်း​နေထိုင်​သူ မပိုးအိဖြူ (ခ)မပိုးအိ.(၂၄)နှစ်​(ဘ)ဦးတင်​မြင့်​တို့နှစ်​ဦးက အကျဉ်းသားနိုင်​လင်းထွန်းကို​ထောင်​ဝင်​စာပစ္စည်းများလာပို့စဉ်​
ခွင့်​လက်​မှတ်​များနှင့်​အတူ YGN BB 4301 PROBOXကားတစ်​စီးတို့အားရှာ​ဖွေပုံစံဖြင့်​သိမ်းထား​ကြောင်း​မြောင်းမြမြို့တွင်​
မွောငျးမွအကဉျြးထောငျတှငျ ပွဈဒဏျ(၂၉)နှဈကနြသေော အကဉျြးသားအား ထောငျဝငျစာပစ်စညျးနဲ့အတူ မူးယဈဆေးဝါးမြား ထညျ့သှငျးပေးပို့မှုဖွဈပှား
မွောငျးမွ ဇနျနဝါရီ ၂၉
၂၉.၁.၂၀၁၉ နံနကျ.၁၁နာရီ၄၅မီးနဈခနျ့အခြိနျ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီးမွောငျးမွမွို့ အကဉျြးထောငျတှငျထောငျဒဏျ(၂၉)နှဈကနြသေော အကဉျြးသား
နိုငျလငျးထှနျး(ခ)ဖိုးခှေး(ခ)တငျကိုဦး(၂၈)နှဈ(ဘ)ဦးခငျမောငျထှေး အမှတျ.၆၂.အောငျမင်ျဂလာလမျး.ကွူစမျးကြေးရှာ.မင်ျဂလာဒုံမွို့နယျ အားရနျကုနျမွို့ပနျးပဲတနျး အမှတျ၁၈.ရပျကှကျ ဗိုလျစှနျပကျလမျးထိပျနသေူ
ဇျောမငျးကိုကို.(ခ)ရာမနျ(၂၁)နှဈ(ဘ)ဦးဇျောဝငျးနှငျ့မွဝတီမွို့အမှတျ(၂)ရပျကှကျပတ်တမွားလမျးနထေိုငျသူ မပိုးအိဖွူ (ခ)မပိုးအိ.(၂၄)နှဈ(ဘ)ဦးတငျမွငျ့တို့နှဈဦးက အကဉျြးသားနိုငျလငျးထှနျးကိုထောငျဝငျစာပစ်စညျးမြားလာပို့စဉျ
ခှငျ့လကျမှတျမြားနှငျ့အတူ YGN BB 4301 PROBOXကားတဈစီးတို့အားရှာဖှပေုံစံဖွငျ့သိမျးထားကွောငျးမွောငျးမွမွို့တှငျ
ရက်သားလေးသာရှိသေးပေမယ့် အရမ်းကို ချောနေပြီဖြစ်တဲ့ မြတ်ရတနာကျော်ရဲ့ သမီးလေး ဗီဒီယို 😱😱
ရာသီဥတု ….ပူပူလေးမှာ ….ဖာလူဒါ အေးအေးလေး…. လုပ်စားကြည့်ရအောင်…
“နေတိုးနဲ့ မိုးဟေကို တို့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကို အတူတွဲမြင်ရဦးမယ့်...